XOG: Madaxweynayaashii hore oo kaarto MD Farmaajo xanuujin karto Oga aargudanaayo dhacdadii shalay -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Madaxweynayaashii hore oo kaarto MD Farmaajo xanuujin karto Oga aargudanaayo dhacdadii...
XOG: Madaxweynayaashii hore oo kaarto MD Farmaajo xanuujin karto Oga aargudanaayo dhacdadii shalay
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in mucaaradka ay durba bilaabeen naqshadeynta qaabka ay uga aargoosanayaan dowladda Farmaajo.
Illo wareedyo ayaa sheegaya in talaabadooda ay noqon doonto mid salka ku haysa arrimo qabiil, waxaana la bilaabay dejinta kaartadaas.
Siriqdaas ayaa la sheegayaa in diyaarinteeda ay si rasmi ah u bilaabatay caawa oo Axad ah isla markaana ay Sabti soo galeyso.
Tani ayaa ka dambeysay markii mucaaradka bahdilkii ugu xumaa ay kala kulmeen markii ay isku dayeen in ay u safraan Beledwayne.
Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo qayb ka ahaa ayaa aad uga carooday, waxayna shaaca ka qaadeen in ay go’aan cad qaadan doonan.
Previous articleAl-Shabaab Oo Isaga Baxay Deegaano Muhiim ah Ka Tirsan Gobolka Mudug
Next articleSAWIRRO: Madaxweynaha Koonfur Galbeed Oo Gaaray Degmada Waajid